"Nefa manome fahasoavana bebe kokoa Izy. Koa hoy izy: "Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona, fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena"- Jak. 4:6.
Rehefa mifandray amin'i Kristy ianao, amin'ny fileferana sy fankatoavana tanteraka, dia amin'izay ihany ianao vao voaro. Mora ny zioga, satria i Kristy no mitondra ny vesany. Rehefa mitondra ny hazo fijaliana ianao, dia tonga maivana izany. Ary izany hazo fijaliana izany no antoka ho anao ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tombontsoa ho antsika tsirairay ny hanara-dia an'i Kristy amim-pifaliana, ary hiloa-bava isaky ny indray mandingana hoe: "Ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy". Saingy tsy maintsy raisintsika ho boky fianarantsika ny Tenin'Andriamanitra raha faniriantsika ny hakarina any an-danitra. [...]
Tsy takatry ny sain'oIombelona ny fietren'i Kristy Jesôsy tonga nofo. Tsy azon'ireo izay mino ny Tenin'Andriamanitra isalasalana na oviana na oviana anefa ny maha-Andriamanitra Azy sy ny fisiany talohan'ny nanorenana izao tontolo izao. Miresaka momba ilay Mpanalalana antsika ny apostoly Paoly. Ambarany fa Izy no ilay Zanaka lahitokan'Andriamanitra. Nanana ny endrik'Andriamanitra Izy, ary Mpanapaka ny tafiky ny lanitra manontolo. Notafiny ny maha-olombelona anefa ny maha-Andriamanitra Azy, ka naka ny endriky ny mpanompo Izy (...)
Tamin'ny nanekeny ho tonga olombelona no nanehoan'i Kristy ny fanetren-tena izay mahatalanjona ny mponin'ny lanitra. Tsy ho fanetren-tena ny faneken'i Kristy ho tonga olombelona raha tsy teo ny fisiany hatrizay hatrizay. Aoka hosokafantsika ny saintsika mba hahalalantsika fa navelan'i Kristy ny akanjom-piandrianany, ny satroboninahitra maha-Mpanjaka Azy, ary ny fanapahany. Notafiny ny maha-olombelona ny maha-Andriamanitra Azy, mba hanatonany ny olona eo amin'ny toerana misy azy, sy hanaovany ny fianakavian'ny taranak'olombelona ho tonga zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra. Nankato hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy mba hamonjeny ny olona. — YI, 13 Oktobra 1898
Hiseho eo amin'ny fiainana sy ny toetr'izay "mandeha toy izay nandehanany koa" ny fahalemem-panahy sy ny fanetren-tena izay nampiavaka ny fiainan'i Kristy. — YI, 08 Novambra 1894